850 million discount for recharge card sellers! - TechPana Tech News Nepal
शुक्रबार, श्रावण ३०, २०७७ ०८:१३
भायनेटको दशैं अफर, टेलिभिजन किन्दा १ वर्षसम्म इन्टरनेट
ह्वाट्सएपको च्याट अब स्वतः मेटिएर जाने !
विश्वकै ठुलो इन्टरनल हार्ड डिस्क ड्राइभ आउँदै, कति
मेडिकल विद्यार्थीले बनाएका एप, जो देशभन्दा विदेशमा लोकप्रिय
डिजिटल मुद्राको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई
नछोइकन कल उठाउन मिल्ने ओप्पो एफ१७ प्रो नेपालमा,
रिचार्ज कार्ड विक्रेतालाई टेलिकमको ८५ करोड छुट !
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठूलो रकम रिचार्ज कार्ड विक्रेतालाई छुट दिएको छ । टेलिकमले पहिलोपटक गत आवमा ८५ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रिचार्ज कार्डबापत छुट उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
यसअघि रिचार्ज कार्ड विक्रीमा कमिसन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा टेलिकमले गत आवदेखि छुट उपलब्ध गराउन थालेको हो । यसरी छुट दिँदा टेलिकमको आम्दानीमा भने व्यापक असर गरेको छ ।
टेलिकमले सेवा विक्रीबापतको आम्दानीबाट रिचार्ज कार्ड विक्रीमा छुट उपलब्ध गराउँछ । यस्तो छुट लागु नहुँदा सेवा विक्रीबापत टेलिकमको आव २०७५/०७६ को आम्दानी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कायम थियो । यसमा कम्पनीले कुनै छुट उपलब्ध गराउनु परेको थिएन ।
तर गत आवदेखि यसरी छुट उपलब्ध गराउँदा टेलिकमको आम्दानी मै व्यापक फरक देखिएको छ । गत आवमा टेलिकमले सेवा विक्रीबापत ३५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेपनि छुट बापतको रकम घटाउँदा सोही शीर्षकको वास्तविक आम्दानी केवल ३४ अर्ब ५७ करोड ४७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई बक्यौता बुझाउन अन्तिम मौका दिएको छ । भदौ २९
पुसदेखि मोबाइल ब्यालेन्सबाटै सामान किन्न मिल्ने सेवा थाल्दै टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले आगामी पुसभित्र मोबाइलको ब्यालेन्स प्रयोग गरी
काठमाडाैं । विद्यार्थीका लागि सहुलियत दरमा इन्टरनेट दिने सरकारी याेजना अनुरूप नेपाल टेलिकमले ‘पाठशाला सियुजी
पोलमा झुण्डिएका तार व्यवस्थापन गर्दै टेलिकम
बाग्लुङ । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय बागलुङले शहरभरका पोलमा झुण्डिएका टेलिफोन तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापनको
नछोइकन कल उठाउन मिल्ने ओप्पो एफ१७ प्रो नेपालमा, ५ मिनेट चार्ज गर्दा ४ घण्टाको टकटाइम
डिजिटल मुद्राको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई पत्राचार
विद्यार्थीको लागि टेलिकमको आकर्षक अफर, ९९ रुपैयाँमै अनलिमिटेड टकटाइमसँगै ५ जीबी डेटा
‘वर्क फ्रम होम’मा रहेका कर्मचारीको निगरानी गर्ने सफ्टवेयरको प्रयोग बढ्दै
हाम्रो पात्रोको बेटा भर्सनमा समाचार रोजेर पढ्न सकिने फिचर, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
प्रदेश १ मा स्टिम सिकाइ चौतारी आयोजना हुँदै, अनलाइनबाटै यसरी बन्नुहोस् सहभागी
आईपीएलको डिजिटल क्याम्पेनमार्फत प्रयोगकर्तालाई जोड्दै डिशहोम
मेडिकल विद्यार्थीले बनाएका एप, जो देशभन्दा विदेशमा लोकप्रिय छन्